छक्का कसरी हान्छन् क्रिस गेल ले ? - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 00:58
छक्का कसरी हान्छन् क्रिस गेल ले ?
इनेप्लिज २०७२ चैत ५ गते १४:३६ मा प्रकाशित
वेस्टइन्डिजका ब्याट्म्यान क्रिस गेल ३६ बर्ष पुगे । बेस्टइन्डिज क्रिकेट टिम क्रिस गेलको भरमा टिकेको जस्तो देखिन्छ । बुधबार इङल्यान्डको विरुद्ध गेलले ४८ बलमा १०० रन बनाउँदै खेले जसमा ११ छक्का थिए ।
अर्थात १०० मा ६६ रन छक्काबाट गेलले जम्मा गरेका थिए । दुई ओभरको औसत निकाल्ने हो भने गेलले यसमा ३३ प्रति ओभर भन्दा बढी रन जोडे । साथै गेलले २००७ को टी–२० विश्वकपको एक म्याचमा १० छक्का जोडेर किर्तिमान राखेका थिए । पछिल्लो ११ छक्काले उनको आफ्नै किर्तिमान तोडिएको छ ।
लामो कपाल भएका ६ फिट अग्ला गेल जब म्याचको तयारी गरिरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला उनी त्यति खुसी देखिँदैनन् । क्रिस गेललाई नेटमा अभ्यास गरेको देख्नु भयो भने सहज अन्दाज लगाउन सकिन्छ कि उनलाई छक्का हान्न मन पर्छ । उनको तयारी नै यस्तै तौरतरिकाको हुने गर्छ ।
धेरै मानिसलाई यो थाहा छैन गेलले पछिल्ला केहि बर्षदेखि कम्मर दुखाइको समस्या झेल्दैछन् । यस कारण उनले धेरै दौडनु पर्ने र डाइव गर्नु पर्ने स्थानमा फिल्डिङ गर्दैनन् । गेलको अभ्यासको समय स्ट्यान्डसमा बसेका पत्रकार पनि सावधान हुने गर्छन् । किन भने उनको प्रहार कहिलेकाँहि त्यहाँ सम्म पनि पुग्ने गर्छ ।
अर्को कुरा गेलले लामो ह्यान्डल भएको गह्रौँ व्याटले व्याटिङ गर्ने गर्छन् । गह्रौँ ब्याटले खेल्ने महान खेलाडीमा सचिन तेन्दुलकर, विवियन रिचडर्स र इयान बाथम पनि हुन् । गेलले टी–२० विश्वकपमा अहिले सम्म ९ सय रन बनाइसकेका छन् । सम्भवत पिज्जा र माछाका सौखिन गेलको यो अन्तिम टी–२० विश्वकप हुने छ ।